Raadi makhaayadaha leh Spotbros ee loogu talagalay Android | Laga soo bilaabo Linux
Soo hel makhaayado leh Spotbros oo loogu talagalay Android
Haddii aad waligaa booqato meel ama aad ku maqantahay fasax fog, waxaad ka raadin kartaa makhaayado kala duwan adoo adeegsanaya aaladdaada moobilka iyada oo ay ugu wacan tahay mid ka mid ah howlaha badan ee codsigu soo bandhigo Spotbros ee loogu talagalay Android.
Hawlaha lagu daray codsigan waxaan kaheli karnaa maqaayadaha ugu dhow meesha aan degno, taas oo noo ogolaaneysa inaan aragno faallooyinka ay adeegsadayaasha kale ku daraan sidaas darteedna aan ku gaari karno go'aan sax ah markii aan dooraneyno meel wax laga cuno.
cunt spotbros loogu talagalay android Kaliya noo oggolaan mayno inaan helno maqaayadaha, laakiin sidoo kale hudheellada oo waxay leedahay hawl gaar ah oo loo yaqaan "qaylo" halkaas oo aan farriimo ugu diri karno isticmaaleyaasha ku dhow ee aan ka codsaneyno talooyinka ama aan ku siinno xoogaa faallooyin ah.
Tani Codsiga Android Waxay buuxisaa dhamaan howlaha shabakada bulshada, taas oo aan kula wadaagi karno khibradaha ama aan ku abuuri karno kooxo u gaar ah si aan ugu isticmaalno nidaamka fariimaha deg dega ah.
spotbros Waxay u leedahay astaan ​​isticmaale kasta oo aad ku arki karto macluumaad si buuxda u dhammaystiran oo ku saabsan mid kasta, oo leh interface aad u fiican oo dareen leh.
Lagu arkay: xmoviles.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » dhowr » Soo hel makhaayado leh Spotbros oo loogu talagalay Android
Windows wuxuu siiyay Sony waqti adag CES 2013